Home Wararka Aqriso:Xildhaano Wado Mooshin ka dhan ah Hishiiskii Farmaao uu lagalay Itoobiya oo...
Aqriso:Xildhaano Wado Mooshin ka dhan ah Hishiiskii Farmaao uu lagalay Itoobiya oo Muqdisho sharar ku leh
Xog gaara oo aan helnay ayaa sheegeysa in ay sii kordhayaan Xildhibaanada Mucaaradka ku ah Heshiisyada dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ka dib Booqashadii Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ee Muqdisho.
Kulan ka dhacay Hotel ku yaala Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Xildhibaano olole ugu jira sidii Baarlamaanka kaga hor imaan lahaa Heshiisyadaas uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo, iyadoona ujeedka ugu weyn uu ahaa in la abaabulo Olole looga hortagayo sidii Baarlamaanka uga soo horjeesan lahaa Heshiisyada dekadaha dalka loogu wareejiyay Dowlada Itoobiya.
Xildhibaanada qaar oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya maadaama uu yahay sharci dejinta ay laga maarmaan tahay inuu fara galiso waxyaabaha dalka u horseedaya gumeysiga iyo Taariikh xumada.
Sidoo kale Kulanka intii uu socday waxaa la isku raacay in Kulanka Golaha Shacabka ee ugu horeeya marka uu furmo Kalfadhiga la horgeeyo kiiskan, iyadoo sidoo kale Xildhibaanada ay bilaabayaan abaabul ay ku badsanayaan tirade Mudanayaasha kasoo horjeeda heshiisyadan.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu dalka yimid Ra’iisul wasaaraha Itoobiya waxaa jawi siyaasadeed oo cusub galay Dowlada uu Hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, iyadoo Mucaaradka ku kacsanaa dowlada ay fursad weyn u heleen habab fudud ay ku dhaleeceyn karaan Siyaasadda Dowlada, waxaase la arki doonaa Ficilada ay la yimaadaan dowlada iyo Mucaaradka.
Previous articleDoorashada Madaxweynaha Turkiga oo Maanta Dhaceysa
Next articleDEG GEG:Putland oo Weerartay Ciidamo katirsan Somaliland
C/kariin Qalbi Dhagax oo sheegay in DFS ayan raaligalin siinin (Aqriso...